Madaxweyne Muuse Biixi Habaarba Kaga Dhacay Hadalka. W/Q Muniir Axmed Cigaal – somalilandtoday.com
Madaxweyne Muuse Biixi Habaarba Kaga Dhacay Hadalka.
Dhaliisha Khudbadii Jaamacadda Burco Iyo Inta Qodob Ee Beenta Aha Ee Ku Jiray.
Madaxweynaha Somaliland Mud. Muuse Biixi Cabdi oo saddex sanno baarka ka jaray muddada uu xilka hayay, khudbadaha uu fagarayaasha ka jeediyo waxay caan ku noqdeen, dhaliil Bulshada isaga wax ka sugaysay uu u jeediyo, canaan, xal la’aan iyo xog la’aan wada socda.
Khudbadiisi u danbaysay ee Madaxweyne Muuse Biixi oo ahayd tii Jaamacadda Burco waxay ahayd mid kamid ah khudbadihii ugu liitay ee Masuul madaxa Qaranka ahi jeediyo. Madaxweynuhu wuxuu xalka dhibaatada waddanka ku soo uruuriyay inay dhammaanten inoo taalo iyadoo isaga loo doortay inuu xal keeno.
Wuxuu ummadda uu Madaxweynaha u yahay oo ay ku jiraan kuwo ka caqli badan kana cilmi badan ku sifeeyay “Ummad Waalan”. Geesta kale waxa khudbada Madaxweynaha ku jiray qodobo aan run ahayn oo Madaxweynuhu si xog-la’aan ah ugu tiraabay waxaana kamid aha.
Sooraan iyo Jawaan Burco ma soo dhafaan oo been ahayd . Labadan Jilaa oo ku shaqaysta kaga qoslinta iyo xayasiiska “ii dhehda” waxay muddo dhawr sanno ah Xafiis ku leeyihiin caasimadda Dalka ee Hargaysa iyagoo hadda u badan joogitaanka Hargaysa. Halkaas Madaxweynuhu run kama sheegin xogna kama haynin Xafiiskooda Hargaysa waaka sawirka ka muuqdo.
Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu sheegay isagoo tirinaaya Tijaarta ugu lacagta badan Somaliland wuxuu yidhi “Waxa ugu lacag badan Oomaar, Dahabshiil iyo Ibraahim Dheere”.
Taasna Madaxweynuhu wuu ka been sheegay Ganacsade Ibraahim Dheere Alle hawnaxaristo ma jirto ganacsi hadda u socda Xoolihii uu ka tagayna waa la dhaxlay oo qofba intiisi ayuu qaatay waxaana Madaxweynaha ugu danbaysay Ibraahim Dheere oo Tijaar aha . Halkaasna xog-la’aan ayaa Madaxweynaha ka haysay.
Isku soo duubo Khudbadaha Madaxweynuhu maha kuwo lamid ah Dadka kale waayo waa Ruuxi ugu sareeyay waddanka, dhegta ayaa loo taagaya lakiin sida aynu hadda Muuse Biixi ka aragnay uma dhaqmaayo sidii Madaxweyne ummaddu hadalkiisa sugayso’ qiimaynayso oo qawlkiisa dhawrayso. Talladu waxay tahay Madaxweyne Muuse Biixi 2-da sanno ee u hadhay dib hawgu noqdo hadaladiisa .